Ducooyinka Axdiga Dambi Dhaafka | QODOBADA SALAADA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Ducooyinka Axdiga Dambi Dhaafka
Maanta waxaan la macaamili doonnaa salaadda axdiga cafis. Ducadan waxaa loogu talagalay samatabbixinta maanka dad badan oo shaydaanku khiyaaneeyey rumaynta dembiyadooda lama cafiyi karo. Runtii wejiga Rabbigu waa ka xaq badan yahay inaan dembiga la arag. Laakiin taasi micnaheedu ma aha in Ilaah gebi ahaanba kaa tegayo sababtoo ah waxaad tahay dembiile. In kasta oo uu neceb yahay dembiga, haddana waa naxariis badan yahay inuu cafiyo dembiyadeenna haddii aan la imaanno towbad -keen dhab ah.
Waxaa jira dad aad u badan oo sii waday inay ugaadhsadaan gacanta shaydaanka si fudud sababtoo ah waxay dareemayaan inaan dembiyadooda la cafin karin. Cadowgu wuxuu xidhxidhay fikirkooda oo wuxuu ka dhigay inay rumaystaan ​​dembigoodu inuu aad u weyn yahay si loo helo cafis. Tani waxay ku kaliftay inay rumaystaan ​​furashadoodu inaysan suurtogal ahayn mugga dembigooda. Haddii aad waligaa la kulantay tan ama hadda lagugu qabtay shabakaddaas, ogow tan. Dambi dhaafka Ilaah waa dhaxalka dhimashada Masiixa. Cibraaniyada 4: 15-16 KQA - Waayo, ma lihin wadaad sare oo aan u nixi karin itaaldarradeenna, laakiin si walba loo jirrabay sidayada oo kale, oo aan dembi lahayn. Haddaba, aynu si geesinimo leh ugu nimaadno carshiga nimcada, si aynu naxariis u helno oo aynu u helno nimco ina caawisa wakhtiga baahida.
Qorniinku wuxuu kaloo sheegay in Ilaah uusan doonayn dhimashada dembiilaha laakiin inuu toobad keeno Ciise Masiix. Markaan si dhab ah uga toobad keenno dembiyadeenna, taasi waa ku filan tahay Ilaah inuu na cafiyo. Sabuurradii 51: 16-17 Waayo, adigu ma aad doontid allabari, haddii kalese waan bixin lahaa. Qurbaanka la gubo kuma faraxdid Allabaryada Ilaah waa ruuxa jaban, qalbi jaban iyo qoomamaysan - Ilaahaas, ma quudhsan doontid. Qorniinku wuxuu leeyahay allabaryada Rabbigu waa ruux jaban, qalbi jaban iyo qalbi qoomamaysan Ilaah ma quudhsan doono.
Tallaabada ugu horreysa ee lagu cafiyo waa qirashada iyo toobadda. Markaad qirto dembigaaga, oo aad ka toobad keento, Ilaah waa ku cafiyi doonaa. Miyaydnaan akhriyin qaybta Qorniinka oo leh kii qariya dembigiisa ma liibaani doono, laakiin kii qirta oo ka tagaa wuxuu heli doonaa naxariis. Haddii aad rabto cafis, qir dembigaaga oo ka toobad keen. Markaad waxyaalahaas samayso, axdiga cafiska ayaa lagu dhaqaajin doonaa noloshaada oo dhan. Tani waa in laga xoreeyo dad badan addoonsiga is-cambaareynta.
Markaad qiratid dembiyadaada oo aad qalbigaaga u leexiso toobadda, dheh salaadahaan:
Sayidow, waxaan kuugu weyneynayaa nimcadaada noloshayda oo dhan, waxaan kuugu mahadnaqayaa nimcadaada iyo ilaalintaada, magacaagu ha ku sarreeyo magaca Ciise.
Sayidow, waxaan ku baryayaa dembidhaafka, waxaan kaa baryayaa inaad igu cafiyaan magaca Ciise. Qorniinku wuxuu leeyahay Qofkii dembigiisa qariyaa ma liibaani doono, laakiin kii qirta wuxuu heli doonaa naxariis. Rabbiyow, dembiyadayda ayaan qirayaa hortaada maanta, waxaan kaa baryayaa inaad maanta ii naxariisto.
Sayidow, Qorniinku wuxuu leeyahay allabaryada Rabbigu waa ruux jaban, qalbi jaban iyo qalbi qoomamaysan Rabbigu ma quudhsan doono. Sayidow, waan jabay, qalbigaygu wuu dhiig baxay maxaa yeelay waxaan ka qoomameynayaa waxyaalihii xumaa ee aan sameeyay, waxaan kaa baryayaa inaad naftayda ugu naxariisto magaca Ciise.
Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad iga xoreyso silsilad kasta oo addoonnimo ah oo cadowgu igu xiray. Waxaan kaa baryayaa inaad ii fududeyso qalbigayga culayska oo aad i siiso nimco aan ku sugo cafis.
Aabbow Rabbi, Qorniinku wuxuu ku leeyahay kitaabka Cibraaniyada 8:12 Waayo, waxaan u naxariisan doonaa xaqdarradooda, oo dembiyadooda iyo falalkooda aan sharciga ahayn mar dambe ma xusuusan doono. Waxaan kaa baryayaa inaad u naxariisto xaqdarradayda. Waxaan baryayaa in dembigayga iyo falalka aan sharciga ahayn dib loogu xusuusan doonin magaca Ciise.
Sayidow, Qorniinku wuxuu leeyahay waxaad tahay mid naxariis badan oo wax cafiya, in kastoo aan isaga ku caasiyownay. Waxaan kaa baryayaa inaad iga nadiifiso dembigayga. Waxaan kaa baryayaa inaad jidkayga ka dhigto mid hagaagsan magaca Ciise.
Aabbe, waa la qoray, waan u naxariisan doonaa kii aan u naxariisto, kii aan u naxariisto ayaan u naxariisan doonaa. Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad ii naxariisato. Waxaan ka baryayaa kuwa ka mid ah kuwa naxariistaada heli doona inaad igu tiriso inaan u qalmo magaca Ciise.
Sayidow, waa qoran tahay, xataa haddii dembigaygu guduudan yahay sida guduudka ah, waxay ka sii caddaan doonaan barafka. Hadday dembigaygu guduudan yihiin sida guduud, Waxay ka caddaan doonaan sida dhogor oo kale. Aabe, iyada oo la raacayo dhiiga ku daatay iskutallaabta Calvary, waxaan ku baryayaa in dembiyadayda la cafiyo magaca Ciise.
Aabbow sayidow, si kasta oo eedaysanuhu dembigayga u xusuusto. Si kasta oo cadowgu u adeegsado xusuusta fal -dembiyeedkayga si uu ii dhaawaco taasoo igu kaliftay inaan qaddar ku waayo furashadaydii, waxaan kaa baryayaa inaad maanta igu badbaadiso magaca Ciise.
Sayidow, waxaan ka baryayaa qalbi nadiif ah. Waxaan ka baryayaa qalbi u dhiman doona dembiga oo u noolaan doona xaqnimada. Waxaan ka baryayaa nimcadu inay noqoto mid samir leh, waxaan weydiisanayaa nimcada inay ku sii jirto si qumman xagga Ilaah. Qorniinku wuxuu sheegay inay tahay xorriyadda uu Masiixu na xoreeyay, haddaba aan adkaysanno inaannaan mar dambe addoon u noqon dembiga. Aabe, waxaan rabaa nimcada inaan kula joogo istaagga saxda ah magaca Ciise.
Qorniinku wuxuu leeyahay, Waayo, Ilaah dooni maayo dhimashada dembilaha, laakiin wuxuu u baahan yahay tawbadkeen xagga Ciise Masiix ah. Sayidow, sidaan u qirtay dembigayga oo aan uga toobad keenay, waxaan kaa baryayaa inaad gudaha iga siiso farxad dhab ah. I sii nimco aan ku hor joogsado shaydaanka markii ay mar kale igu soo kacdo, magaca Ciise.
Qorniinku wuxuu leeyahay, Kii u malaynaya inuu taagan yahay ha fiirsado haddaanu dhicin. Aabe, waxaan ku baryayaa nimcada inaanay mar dambe dembi ku dhicin, fadlan i sii nimcadan maanta magaca Ciise.
article PreviousDucooyinka Axdiga Ee Barakada leh
Next articleDucada axdiga oo ka timid Ruuxa Badluck
Salaadda samatabbixinta Carruurteenna
Sabuurradii 35-aad Dhibcaha Salaadda ee Caddaalad Darrada
Sabuurradii 90-aad Macnaha Aayadda